Semalt Inogovera Vital Tips Uye Zvirongwa Zvokurwisana WordPress Comment Spam
Kana uine nzvimbo inozivikanwa yepaiti kana bhurogi, mukana iwe uchawana mavara akawanda e spam zuva rega rega. Ndinofara, takadzidza kurwisana nenyaya dze spam muShokoPress, uye maitiro akawanda akaiswa nenguva. Kana iwe uri newbie uye usingazivi kuti unofanira kutanga sei, unofanira kufungisisa aya mazano anokosha uye zvigadziriswa kurwisa zvinyorwa zvepa spam muShokoPress sezvakatsanangurwa naIgor Gamanenko, nyanzvi inoshamisa kubva kune Semalt .
1. Activate the Akismet plugin:
Zvakachengeteka kutaura kuti Akismet imwe yezvinyorwa zvakakurumbira uye zvinokosha zveShokoPress nzvimbo uye blog - online casino usa bonus. Iwe haufaniri kuikanda iyo sezvo iyi plugin inouya isati yaiswa pane imwe nheyo ye WordPress. Asi iwe unofanirwa kugadzirisa zvirongwa zvaro maererano nezvinodiwa nemunhu. Akismet ndicho chivimbiso chinonyanya kuvimbwa kana zvasvika pakubvisa zvinyorwa zve spam. Iyo inonongedza mafungiro asina maturo uye inokudzivirira kubva pakudhinda zvinhu spam pa blog yako.
Vachibvumi vatsva uye webmasters vanotenda kuti kushandisa plugins kubvisa zvinyorwa zvinotevera kubva pane zvakanyorwa munyori zvakachengeteka, asi hazvina kunaka. Izvozvi, zvose zvinyorwa uye zvinyorwa zvinotevera zvinokosha pakuvandudza kutsvaga kwejini injini yewebsite yako..Kunyange izvo zvisiri zvinyorwa zvemashoko zvinotumirwa nevanhu chaivo saka iwe haugone kuvadzivirira nemapulamu akawanda. Pane kudaro, unofanirwa kubvisa zvinyorwa izvi zvisingaratidzi semutemo kwauri. Kana iwe usingashandisi chero purogiramu munyaya iyi, enda kune yedu yechitatu kunhi.
3. Deredza Maonero eSpam neKikiki:
Nzira iyi inobatsira chete kana iwe uchiziva kuti makiki anobata sei uye kuti angaita sei kuti agadziriswe. The Cookies for Comments plugin ndeimwe yezvinotonhora uye ita mabasa ako aite nyore. Yakawanda ye spam uye bots mabhuku akazvinyorwa, uye iwe unogona kuchengetedza nzvimbo yako kubva kwavari nekuderedza nhamba yemhinduro dze spam uchishandisa makiki.
4. Bvisa Spam Comment Bots ne Honeypot:
Technology ye Honeypot ndiyo imwe yezvinonyanya kushanda kana zvasvika pakunyengedza marashiro emitambo. Kutanga, iwe unofanira kuisa nekugadzirisa WP-Spam Fighter plugin. Kana wakambomiswa, enda kuZvirevo »WP-Spam Fighter nzvimbo uye usakanganwa kubatsira korepot kudzivirirwa. Zvechokwadi zvichadzivirira nzvimbo yako kubva kune spam comments uye bots zuva nezuva.
5. Wedzera Captcha Verification:
Kuwedzera kuvharidzirwa kwechikwata, chinhu chakanakisisa chiri WP-reCAPTCHA. Neyi purogiramu, unogona kuita nyore nyore captcha zvinetso pane mafomu ekupa maonero, kudzivirira vanokuvadza nevatadzi kuti vakugumise zuva nezuva nemhinduro dze spam. Rega ini pano ndikuudze kuti vanhu uye bots vanogona kungoisa iyo captcha haigoni kunyange kuziva mazwi akataurwa mu captcha; Nokudaro, iwe uchave nechokwadi chokuti nzvimbo yako yakachengetedzwa pasina zvisingabatsiri uye zvisingabatsiri.
6. Dzvitsa mazano paMedia Attachments:
Chikamu chakanakisisa cheShokoPress ndechekuti ichagadzirisa zvigadziriswa zvifananidzo uye mapeji apo vashanyi vako vanogona kuona mifananidzo uye vachisiya mazwi maererano nezvido zvavo. Izvi zvinongokudzivirira kuti urege kugamuchira zvinyorwa zvepa spam sezvo vanhu chaivo vachabatana newebsite yako. Iwe unogona kudzivisa zvinyorwa pane zvese zvepa media, zvinyorwa uye zvibatanidzwa zvakakodzera. Kuvhara zvinyorwa izvi zvichaponesa WordPress yako nzvimbo kubva kune spammers uye hackers.